ESI TINYE EGWU NA INSTAGRAM VIDEO - INSTAGRAM - 2019
Otu esi etinye music na vidiyo Instagram
Ná mmalite, ụlọ ọrụ Instagram nyere ndị ọrụ ohere ibipụta naanị foto na nhazi 1: 1. Mgbe e mesịrị, ndepụta nke atụmatụ nke netwọk mmekọrịta a abanyelarị nke ukwuu, taa kwa onye ọrụ ọ bụla nwere ike ibipụta vidiyo maka otu nkeji. Na iji mee ka vidiyo ahụ dị mma, ọ ga-ebu ụzọ kee ya, dịka ọmụmaatụ, site na ịchegharị egwu.
Tupu i tinye ụda olu na vidiyo ahụ, ị ​​ga-achọ otu ihe dị mkpa: ọtụtụ n'ime egwu na-echebe site na ikikere. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na egwu ejiri na vidiyo na-echebe site na nwebisiinka, mgbe ahụ na usoro nke mbipụta ị nwere ike ịda mbà. Na ọnọdụ a, i nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu ahụ:
Dekọọ egwu pụrụ iche gị;
Chọta egwu na-enweghị nwebisiinka (na Intaneti e nwere ọnụ ọgụgụ nke ụlọ akwụkwọ nwere ụda yiri).
Ihe omumu: Esi emepụta egwu na kọmputa gị
Tinye egwu na vidiyo
Ya mere, i nwere ma vidio na egwu kwesịrị ekwesị. Ọ na - anọgide maka obere - iji jikọta faịlụ abụọ a. Ị nwere ike ime usoro yiri ya site na smartphone ma ọ bụ na kọmputa.
Jikwa egwu na egwu gị
Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na ị kpebie ikpokọta egwu na vidiyo na ama gị, mgbe ahụ i nweghị ike ime n'enweghị ngwa pụrụ iche, dị ka ọkọlọtọ Instagram ngwaọrụ adịghị ekwe ka ị rụọ ọrụ a. N'ebe a, nhọrọ nke mmemme bụ nnukwu - ị ga-ele anya n'elu ụlọ ahịa maka iOS, Android na Windows.
Dịka ọmụmaatụ, maka iOS, a na-ewere ngwa iwụnye iMovie kachasị mma, ọ bụkwa ihe atụ nke nchịkọta vidiyo a ka anyị na-atụle usoro ọzọ nke ijikọta egwu na vidiyo. Ụkpụrụ nke iMovie dị nnọọ ka ndị editọ vidio ọzọ, ya bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike iji ntụziaka a bụrụ ihe ndabere.
Download ngwa iMovie
Nwee ngwa iMovie. Nke mbụ, ị ga-achọ pịa bọtịnụ ahụ. "Mepụta oru ngo".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ "Movie".
Ihuenyo gị ga-egosipụta gallery nke foto na faịlụ vidiyo, ebe ị ga-achọ ịhọrọ vidiyo nke ga-arụ ọrụ ọzọ.
Gbanyere vidiyo, ugbu a, ị nwere ike ịga tinye ụda. Iji mee nke a, họrọ akara ngosi na akara aka, na na windo ọzọ nke gosipụtara, kpatụ ihe ahụ "Audio".
Chọta egwu si n'ọbá akwụkwọ ahụ na smartphone nke a ga-ekpuchi na vidiyo. Mgbe ahụ pịa ya ma họrọ bọtịnụ ahụ. "Jiri".
Na nsonye sochi, a ga-agbakwunye egwu ahụ na mmalite nke vidiyo ahụ. Ọ bụrụ na ị pịgharịa na egwu egwu, ị ga-enwe ụfọdụ ngwa ngwa ederede dị: trimming, olu, na ọsọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee mgbanwe ndị dị mkpa.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-agbanwe vidiyo na vidiyo. Iji mee nke a, họrọ vidiyo vidiyo, mgbe ahụ, ngwá ọrụ ga-apụta na windo nke mpio ahụ, na-enye gị ohere ịmepụta, gluu, ọsọ ọsọ, ogbi, ederede ederede, tinye mmetụta, na ihe ndị ọzọ.
Mgbe e kere vidio maka Instagram, ị ghaghị ịchekwa ya na nchekwa ngwaọrụ ma ọ bụ na-ebipụta ya ozugbo na netwọk mmekọrịta. Iji mee nke a, na akuku aka ekpe, họrọ bọtịnụ "Emere"mgbe ahụ na nchịkọta nhọrọ ndị na-egosi, pịa na mbipụta mbipụta.
Gaa ihe "Zọpụta Video"Iji tinye vidiyo ahụ na nchekwa ngwaọrụ, ma ọ bụ họrọ n'etiti ngwa ndị dịnụ, họrọ Instagram ka ị gaa na mbipụta.
Egwu na-ekpuchi na kọmputa
N'ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwadebe vidiyo na kọmputa, wee bipụtara ya na Instagram, ị ga-achọkwa iji mmemme pụrụ iche ma ọ bụ ọrụ ịntanetị. Ụlọ ọrụ anyị nyochaa ọtụtụ usoro mmemme nke na-enye gị ohere ikpuchi ụda na videotapes - ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ ihe ịchọrọ.
Lee kwa: Usoro kachasị mma maka ịkwanye egwu na vidiyo
Ọ bụrụ na ịgaghị achọ ọrụ dị elu na nhazi ọkachamara nke usoro ihe omume maka ntinye vidiyo, mgbe ahụ, Windows Live Movie Studios, nke bụ ngwá ọrụ na-enweghị n'efu ma rụọ ọrụ maka ịrụ ọrụ na faịlụ mgbasa ozi, zuru oke maka egwu egwu.
O di nwute na, ndi mmepe enweghi ike akwado usoro ihe omume a, ma, o ka na-aru oru nke oma na asusu nile nke Windows di ugbu a, tinyere nke iri abali nke abuo, nke a kpochapughi oru a.
Ịmepụta Windows Live Movie Maker. Nke mbụ, anyị ga-agbakwunye otu ọdebe na ọbá akwụkwọ. Iji mee nke a, na aka ekpe aka ekpe pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye vidiyo na foto".
Ihuenyo na-egosiputa Windows Explorer, nke ịchọrọ ịkọwa ụzọ na nbudata na-ebudata. Mgbe ịtinye vidiyo, ị nwere ike ịga n'ihu ịgbakwunye egwu. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye egwu" ma họrọ akara kwesịrị ekwesị na kọmputa.
Ọ bụrụ na achọrọ, a ga-ebelata ụda sitere na vidiyo ma ọ bụ gbanyụọ kpamkpam. Iji mee nke a, gaa na taabụ Dezie na site na ịhọrọ "Ụda vidio", dozie ihe mmịfe ahụ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ime na egwu egwu ahụ agbakwunyere, ma ọ bụrụ na ọrụ achọrọ a ga-arụ na tab "Nhọrọ".
Lee kwa: Esi edezi vidiyo na kọmputa gị site na iji Windows Live Movie Maker
Mgbe ị gwụchara ụda mkpuchi na vidiyo ahụ, naanị ị ga-echekwa ihe mechara rụpụta na kọmpụta ahụ. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ dị n'akụkụ akaekpe aka ekpe. "Njikwa" ma gaa ịkọwa "Save Movie". Site na ndepụta nke ngwaọrụ ma ọ bụ mkpebi maka smartphones, họrọ ihe kwesịrị ekwesị ma mezue usoro mbupụ na kọmputa.
N'ezie, vidiyo ahụ dị njikere, nke pụtara ị nwere ike ịnyefe ya na ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ọ bụla: site na eriri USB, iji ọrụ igwe ojii, wdg. Na mgbakwunye, ị nwere ike ibudata vidiyo site na Instagram na kọmputa gị. Na nkowa banyere usoro a na mbụ, a gwara ya na weebụsaịtị anyị.
Lee kwa: Otu esi ebugote vidiyo gaa Instagram site na komputa
Usoro nke itinye faịlụ egwu na vidiyo bụ nnọọ ihe okike, n'ihi na ị gaghị ejide onwe gị iji naanị otu egwu. Gosi ntụgharị uche gị ma bipụta nsonaazụ ahụ na Instagram. Ị ga-ahụ - vidiyo ga-amasị ndị debanyere aha gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Instagram 2019